Yoruba Nigeria mbeu | MyWeedSeeds.com
Zvibereko: kusvika 12.5oz | 350g m2
Yoruba Nigeria inoshamisa-yakasikwa yakachena mhando kune kwayo kwayakatangira eAfrica. Verengera Africa kuti ibudise anoshamisa masisitimu ayo anofadza kunyangwe ane ruzivo rwekuziva. Yoruba Nigeria ndeye 100% sativa, asi inokura nekukurumidza kupfuura zvaunotarisira. Anonyatso fotopoperiod uye anokwanisa kuburitsa zvirimwa zvakawanda kana zvikarimwa panze munguva yezhizha. Yoruba Nigeria iri, muchokwadi, yakanaka yekunze mbanje chirimwa kune varimi vechidiki. Kunze, anokura akareba, akagwinya, asingadziviriki, uye anoenderana nemamiriro ekunze anotonhora uye anopisa. Kunyangwe isingafungidzirwe semumwe wevapi vedu vepamusoro, anozogadzira cola hombe, refu refu (yepamusoro bud) uye matavi mazhinji emumativi akapfuma mune zvidiki zvidiki. Ichiri kukura, Yoruba Nigeria inopa munhuwi wakasimba weskunk nema nuances ekaroti, mango, uye mandarin orenji Utsi hwake nekuravira zvine simba (asi hazvirume) uye hashi-yakafanana, ine inotapira muchero kupera. Kukwirira kwake ndeyechokwadi sativa - cerebral uye inokwidziridzwa.